Ny Lalàna: Tsy manaiky ny fisian'ny alikaola ny fanekena ... Valin'ny Fanamarinana
Home Lalàna Inona no fanekena amin'ny fampiharana?
Inona no mitranga rehefa mihetsiketsika ny alina ary na ny tanora na ny tanora dia mbola ratsy kokoa noho ny misotro? Rehefa reraka ny tebiteby ary te-hifikitra kely izy ireo, azonao atao ve ny mandeha lavitra? Rahoviana ny hoe 'tsia' dia midika hoe 'angamba'? Inona avy ireo fitsipiky ny lalao? Rahoviana ny tovovavy dia mitodika amin'ny firaisana? Iza no manapa-kevitra?
Fifanekena sy toaka
Nanadihady vehivavy 17 taona niaraka tamin'ny toe-pahasalamana malemy saina avy amin'ny fiaviana manankarena izay nandray anjara tamin'ny fampianarana momba ny fanekena sy ny vehivavy. Hantsoinay izy hoe Jan. Nanome toky ahy izy fa “fantany ny fetrany” amin'ny alikaola. Rehefa nanontaniana izy hoe inona no tiany holazaina tamin'izany dia namaly izy hoe: "Tsy ho mamo loatra aho ka ho faty". Na izany aza, nilaza izy fa "nanao preloaded" alohan'ny handehanany manao fety amin'ny faran'ny herinandro ary nanao firaisana tsy voaaro sy tsy dia voaaro amin'ny lehilahy hafa. Niaiky izy fa tsy nanao firaisana tamin'ireto bandy ireto mihitsy raha tsy mamo. Ary tsy nanaiky ny karazana firaisana ara-nofo, anisan'izany ny firaisana ara-nofo mahery, izay notakian'izy ireo matetika. Saingy nilaza izy fa tsy hanameloka lehilahy iray noho ny 'famporisihany' hanao firaisana tamin'ireny toe-javatra ireny satria nisotro toaka izy ary taitaitra ara-nofo. Tao an-tsainy dia nilaza izy fa tsy maintsy nanome alalana na dia nanenina aza izy ny ampitso.
Ho an'ny olon-dehibe, dia mety hidika hoe tsy mahay mifehy ny fahafahana miaiky malalaka, ny 'fahafantaranao ny fonenanao' amin'ny toaka. Ny tsy fitovian-kevitra toy izany dia mahatonga ny olana momba ny fanekena ny olana amin'ny fitsaràna amin'ny fitsaràna noho ny fanolanana. Nanontaniako i Jan hoe nahoana izy no mety hampidi-doza ny vohoka na ny aretina azo avy amin'ny firaisana amin'ny tsy fampiasana fanabeazana aizana. Namaly izy fa tezitra ny rainy raha hitany fa nanao firaisana ny ankizivavy kely. Nolazainy fa raha bevohoka izy dia nanala zaza fotsiny, nanampy azy ny reniny. Noho izany, na dia eo aza ireo lahateny any am-pianarana mikasika io lohahevitra io, amin'ny zava-misy dia mampatahotra azy ny fomba hamaliana ny ray aman-dreniny ary ny faneren'ny namana hisotroana be dia be ary ny hoe "mahafinaritra" amin'ny alina dia sarobidy kokoa noho ny tombantombany manokana momba ny fahasahiranana ara-pahasalamana ho an'ny tenany. Ny toy izany dia ny atidoha matotra.
Na dia fady aza ny manao firaisana ara-nofo tsy misy fanekena, dia matetika ny vehivavy no mitaraina fa voafandrik'izany. Research dia manondro fa ny 'fandresen-dahatra' matanjaka hanao firaisana ara-nofo dia fomba fanao mahazatra indrindra eo amin'ireo tanora 16-18 taona. Ny tanora lahy sy vavy dia mitanisa ny pôrnôgrafia amin'ny Internet ho mpanentana lehibe. Na dia fantatr'izy ireo aza fa "maharary ny vehivavy" izany, ny tovolahy dia mbola nanery araka izay tratra mba 'handresy lahatra' ny vehivavy hamela azy ireo hanao izany. Na ny tovolahy aza toa tsy nankafizin'izy ireo mihitsy. izany Hiverenan'ny audio minitra 10 miaraka amin'ny mpitarika mpikaroka dia manazava bebe kokoa momba ny zavatra hitan'izy ireo. Vehivavy iray ihany no niaiky fa nankafiziny. Ho an'ny zatovolahy sasany, ny kudo ahazoana ny "elatra volontany" dia mety ho tanjona matanjaka.
Ny fifehezan-tena dia fanamby ho an'ny vehivavy sy ny lehilahy amin'ny fotoana tena tsara, indrindra indrindra eo amin'ny sehatry ny antoko eo anivon'ny zatovo. Raha tsy efa tapa-kevitra ny handamina ny fetra ny drafitr'asa iray, dia mety ho mafy ny manohitra ny fandresen-dahatra matanjaka rehefa manaitra ny firaisana ara-nofo ary rehefa maniry ny ho hita amin'ny maha-manintona ny filan'ny nofo sy ny "hafanana".
Na izany aza anefa, ilaina ny fanabeazana bebe kokoa momba ny fiantraikan'ny alikaola amin'ny fanekena sy ny fomba tokony hitarihana azy eo anatrehan'ny fanerena. Ny fampianarany ny 'mampiaraka ireo fahaiza-manao' ary ny fomba hanajana ny sisin-tany hafa dia ho fandrosoana goavana. Fanadihadiana maro momba ny fihetsika ataon'ny tanora no niantso izao karazana fianarana izao.
<< Inona no atao hoe fanekena amin'ny lalàna? Sexting >>